taura: Media Media Monitoring uye Management Yakaitwa Nyore | Martech Zone
China, Gunyana 5, 2013 Muvhuro, June 23, 2014 Douglas Karr
Todd Gorosi, musoro wehutungamiriri hutungamiriri pa Kelly Services, achangobva kunyora nezve kutaurwa pane zvakatumirwa kubva kuSocial Media Examiner, 14 Zvemagariro Midhiya Zvishandiso zvinoshandiswa neKushambadzira Pros. kutaurwa kwakazara kwenzvimbo yekutarisa uye midhiya yekutarisa chikuva.
kutaurwa kwakagadziridzwa semushandisi-inoshamwaridzika kutsiva yeGoogle Alerts. Ivo muenzaniso webhuku rekuti ungavaka sei chikuva nekuita chinhu chimwe zvirinani kupfuura chero ani zvake. Zvakare nekuve mufaro wakazara kushandisa, inotora zvimwe zvakawanda, ahem, 'zvitaurwa' pamhepo kupfuura chero imwe chikuva chandakashandisa kuti chazove yangu # 1 kuenda-kune zvemagariro kutaurwa chishandiso. Todd Gorosi
Makiyi Akakosha ekutaura
All Devices - Kuwana kutaurwa kubva chero kupi. Shandisa webhu app, Chrome app, desktop desktop yePC, Mac kana Linux kana nharembozha neiyo iPhone kana Android maapp.
Midhiya uye Zvemagariro Kuongorora - Tarisa mamirioni ezviwanikwa mumitauro makumi mana nemaviri uye uve nechokwadi chekuti hapana chauri kushaya chakaburitswa pasocial network, masayiti enhau, maforamu, mablog uye chero peji rewebhu.
Boka Rekushanda - Vaka timu yako, vagovana zviyeuchidzo zvako uye ugopa basa kunhengo dzechikwata chako: bvunza maneja wenzvimbo yako kuti apindure kune tweet, bvunza CMO yako kuti ipe mhinduro pane blog blog, uye uteedzere zviito zvevanhu vese.
Real-nguva yambiro - Ziviswa mu-chaiyo-nguva kuburikidza neapush notices. Gamuchira email yezuva nezuva kana yevhiki. Usatambisa chero nguva. Ita nekukurumidza uye zvakanaka.
Shingairira pa-iyo-iyo - Unganidza ako maakaundi account (Facebook, Twitter) kune ako chenjedzo uye ita pasina kusiya application. Dzorera zvakare kutaurwa, senge kana kugovana zvakanaka zvinotaurwa zvakananga pane yako Facebook peji, tumira kutaurwa kuburikidza neemail, nezvimwe
chakagadzirwa njere - Bvisa ruzha runouya kubva kumamonyanisi uye spams. Tsvaga zviri nyore kutaurwa kwakakosha. Tora matauriro ezvaunotaura. Yese matekinoroji edu ari kudzidza kubva pahunhu hwako.
Statistics & dhata rekutumira kunze - Tora mufananidzo wezvaunotaura nesosi, mutauro uye pamusoro penguva yakasarudzwa. Gadzira mapepa ePDF uye data rekutumira kunze muCSV. Zvifananidze iwe nevako vanokwikwidza.
Iko kune shanduro yebhizinesi zvekutaura, zvakare, iyo inopa yehutongi koni, kubatana, kugovana account account uye manejimendi manejimendi.
Tags: Enterprisetauramagariro enhautodd gorosi
Maitiro Emaoko Mapurogiramu Akachinja Nyika